06 / 04 / 2021 07 / 04 / 2021 ရော့ Paton 1323 Views စာ0မှတ်ချက် 7140 X- တောင်ပံတိုက်လေယာဉ်, 7191 X- တောင်ပံတိုက်လေယာဉ်, 75102 ဖိုးရဲ့ X-Wing တိုက်လေယာဉ်, 75149 ခုခံ X-wing တိုက်လေယာဉ်, 75218 X- တောင်ပံ Starfighter, 75300 မှာ Imperial လည်စည်းတိုက်လေယာဉ်, 75301 လုကာ Skywalker ရဲ့ X-Wing တိုက်လေယာဉ်, 75302 မှာ Imperial လွန်း, Lego, Lego Star Wars, လုကာ Skywalker, R2-D2, Star Wars, Star Warsဖြေ, X- တောင်ပံ, X- တောင်ပံ Starfighter
လတ်တလော Lego Star Wars အစုံသည်ဆောင်ပုဒ်အတွက်အလားအလာရှိသောလမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုနှင့်၎င်းကိုအမှတ်အသားပြုသည် 75301 လုကာ Skywalker ရဲ့ X-wing တိုက်လေယာဉ် ဆန္ဒပြအားလုံးမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
Lego Star Wars ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားကြီးမားသောတန်ဖိုးကြီးလှသောအလှအပနှင့်အုတ်ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကိုယူဆောင်လာ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုနှစ်ပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ဝေသည့်အဆိုအရနှိမ့် ချ၍ ပို၍ ရိုးရှင်းသည့်လမ်းလည်းစတင်နေပြီဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလ 2021 Lego Star Wars အကွာအဝေးသည်အရာများ၏မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်မကြာသေးမီကထုတ်လွှတ်ခဲ့သောအနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်များ၊ အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်သင်္ဘောများပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောထိုသင်္ဘောကျဆင်းမှုများအတွက်အဓိကအကျဆုံးအကျဆုံးလှိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အထူးအကြောင်းပြောနေတာပါ 75302 မှာ Imperial လွန်း (ပြန်လည်သုံးသပ်), 75300 မှာ Imperial လည်စည်းတိုက်လေယာဉ် (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် 75301 Luke Skywalker ၏ X-wing တိုက်လေယာဉ် (ပြန်လည်သုံးသပ်).
တစ်ခုချင်းစီသည်ယခင်၏မျှတသောဝေစုထက်ပိုသောသင်္ဘောပေါ်တွင်အခြေပြုထားသောအစုတစ်ခုဖြစ်သည် Lego ဖြန့်ချိမူကွဲ - စartTIE တိုက်လေယာဉ်နှင့် X-wing တို့၏အဖြစ်အပျက်များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူဘဲ၎င်း၏ယခင်ကထက်ပိုမိုနိမ့်သောအပိုင်းအစဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ဘတ်ဂျက် - သတိထား TIE တိုက်လေယာဉ်၏အပြုသဘောနှင့်အနှုတ်နှစ် ဦး စလုံးကွဲပြားခြားနားမှုကိုရည်ညွှန်းပါပြီနေစဉ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်X-wing သည်သက်ဆိုင်ရာအရင်နှင့်ပိုမိုစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောနှိုင်းယှဉ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ TIE တိုက်လေယာဉ်လိုပဲ၎င်း၏သမိုင်း Lego ဒီဇိုင်းကိုဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်နောက်ကျောခြေရာခံနိုင်ပြီး၊ TIE Fighter ထက် ပို၍ များပြားသည်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မွမ်းမံခြင်း၊ ပြန်လည်အရောင်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းများအလွန်များပြားသည်။
ထိုနည်းတူစွာ, နှစ် ဦး စလုံးမှလုပ်သိသာအပေးအယူရှိပါတယ်ဘယ်မှာ 75302 မှာ Imperial လွန်း နှင့် 75300 မှာ Imperial လည်စည်းတိုက်လေယာဉ်, 75301 Luke Skywalker ၏ X-wing Fighter တိုက်လေယာဉ်ကိုချက်ချင်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အနည်းငယ်သာရှိသည် (R2-D2 ကိုသာမေးပါ။ )
ဖြစ်သကဲ့သို့, နှစ်ခု standout ဆန့်ကျင်က pitting ၌တည်၏ Lego ထံမှ X- အတောင်ပံ Lego Star Warsသမိုင်းကြောင်း - ၁၉၉၉ မှဆင်းသက်လာသောမူရင်း၊ ၇၁၄၀ X-wing Fighter နှင့် 1999 မှအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ 7140 X-wing Starfighter - 2018 Luke Skywalker ၏ X-wing တိုက်လေယာဉ်သည်ယခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာများကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာ (မရည်ရွယ်ဘဲ) အခွန်ဆက်ပေးသည်။ ရှေ့သို့သွားသောလမ်းကြောင်း Lego Star Wars ပိုမိုကျယ်ပြန်ဆောင်ပုဒ်အဖြစ်။
ဘယ်မှညာသို့: ၇၁၄၀ X-wing Fighter (7140), 1999 X-wing Starfighter (75218), 2018 Luke Skywalker ၏ X-wing Fighter (75301) ။
၁၉၉၉ ခုနှစ်၏ 1999 X-wing Fighter တိုက်လေယာဉ်သည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုခံနိုင်ပြီးအနီတွင်အနီရောင်နှင့်အနီရောင်အသေးစိတ်များနှင့်တောက်ပသော trans-neon လိမ္မော်ရောင်တွန်းစက်၏ထွက်ရှိမှုအဟောင်းများကိုထုတ်ယူထားသည်။art နောက်လိုက်ခဲ့သော LEGO X-wing တိုင်းမှ (၂၀၀၂ ခုနှစ်၏ ၇၁၄၂ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်) သို့သော်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အသွေးမှပင်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အရွယ်အစားသေးငယ်သည့်အထိ ၇၁၄၀ သည် ap ကိုပိုင်ဆိုင်သည်art22 နှစ်အပေါ် icular ကျက်သရေ။
ထိုအသွင်အပြင်အတွင်းပြန်ကျသွားပြီးကျိုးပဲ့လွယ်သောတောင်ပံအနှံ့တွင်မှန်ကန်သည် classic Lego Star Wars p ရတဲ့ဘို့ - ကြောင်းသတ်မှတ်artအလွန်အမင်းမှန်ကန်သည့် icular အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ယနေ့ခေတ်မော်ဒယ်များနှင့်အတူပိုမိုဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ထိုင်နေသည်၊ ၇၁၁၁ Sith Infiltrator နှင့် 7151 Millennium Falcon တို့ကဲ့သို့သောခေတ်နောက်ကျသောပိုမိုရှင်းလင်းသောပုံစံဒီဇိုင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်အချိုးကျမှုနှင့်တိကျမှုရှိခြင်း၊ ပုံသဏ္,ာန်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အချို့သောပိုမိုတိကျသောနှင့်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင်ပင်ရှိသည်။ တောင်ပံများပွင့်နေပြီး R2-D2 မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်၏နောက်ကွယ်တွင်ရှေ့သို့မျက်နှာမူ။ ထိုင်လျက်တိုက်လေယာဉ်၏အရှည်သည်အတောင်ပံများ၏အကျယ်နှင့်ညီမျှသည်။
၂၆၆ ခုထက်နည်းသောအပိုင်း (၇၁၄၀ ၏စုစုပေါင်းအချို့ကိုဘေးတိုက်တည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုသည်) တွင် LEGO ဖြစ်သည် Star Wars သူနှင့်အတူဖြန့်ချိခဲ့သည့်အခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်ပထမဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ခြင်းကိုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်မှန်ကန်သွားသည် - ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်ကပင်အကောင်းဆုံးထင်ဟပ်နိုင်သည့်အရာ၊ ၎င်း၏ပိုပြီးခေတ်သစ်ညီအစ်ကိုတို့နှင့်အတူအရပျထဲက။
၎င်းတွင်ခေတ်သစ် LEGO အတွက်အခြေခံစံနှုန်းအသစ်ကိုသတ်မှတ်ပေးသည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၏ ၇၅၂၁၈ X-wing Starfighter ပင်ပါဝင်သည် Star Wars ဒီဇိုင်း။ ၁၉၉၉ ကြယ်ပွင့်တိုက်လေယာဉ်၏ဈေးနှုန်းနှင့်ပိုမိုထိရောက်သော ၇၃၁ အပိုင်းအစများသုံးဆစျေးနှုန်း ၇၅၂၁၈ သည်နှစ် ၂၀ နီးပါး X-wing ဒီဇိုင်းတွင်စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သောအရာအားလုံးကိုယူပြီးပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အမှန်စင်စစ် LEGO X-wingများဖြတ်သန်းလာခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၏လက်ရာလက်ရာများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Dagobah-based 2018 X-wing Fighter သည်ပိုမိုတိကျစွာပုံသွင်းထားသောနှာခေါင်း၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအရွယ်အစားနှင့်အတောင်များကိုဖွင့်ရန်ကစားနည်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အစီအစဉ်။
Lego 1999, 2018 နှင့် 2021 ခုနှစ်တွင် X- တောင်ပံဒီဇိုင်း။
2012 ခုနှစ်တွင် bodywork ကျော်ချောမွေ့, တွန်းကန်အားအင်ဂျင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်ကစား, လေဆာအမြောက်များ၏ပိုမိုတိကျသောကိုယ်စားပြုမှုကိုမိတ်ဆက်နှင့်အောက်ဖက်ဇောက်ထိုးအပေါ်ဘက်တောင်ပံမှာလှန်လိုက်သောဒီဇိုင်းကိုရောက်လာတယ်။ ၎င်းသည်တောင်ပံဖွင့်လှစ်သည့်ယန္တရားကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်စေခဲ့သည်။ သို့သော်ပုံမှန်တိုက်လေယာဉ်၏ဘေးထွက်ကိုရင်ဆိုင်ရန် R2-D2 90 ဒီဂရီလှည့်ရန်ပုံမှန်မဟုတ်သောပြwithoutနာမရှိခဲ့ပါ။
ဒါဟာ 2015 ရဲ့ 75102 Poe ရဲ့ X-wing တိုက်လေယာဉ်နှင့် 2016 ၏ 75149 Resistance X-wing တိုက်လေယာဉ် (ကွဲပြားခြားနားသောဆေးသုတ်အလုပ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများကိုထင်ဟပ်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများနှင့်အတူရှိသော်င) သင်္ဘောကိုဖြတ်ပြီး (အလုံးစုံသောမိုးသစ်တောအပါအဝင်) ကိုဖြတ်ပြီးအလုံးစုံအသေးစိတ်ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ LEGO X-wing ၏အလုံးစုံဒီဇိုင်း၊artတောင်ပံယန္တရားပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိပြီး၎င်းကိုပုံစံ၏ထိပ်တွင်ထည့်သွင်းထားပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်သောဗေဒကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ထိုချဉ်းကပ်မှုအပြင် LEGO X-wing ဒီဇိုင်းတွင်မော်ဒယ်လ်မှတိုးတက်သောအရာအားလုံးသည် 2018 ၏ ၇၅၂၁၈ X-wing Starfighter သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားခြင်းနှင့်အတူပျောက်ကွယ်သွားသောထပ်မံတိုးတက်လာသောတောင်ပံယန္တရားနှင့်အတူတူဖြစ်သည် ပိုမိုရိုးရှင်းပြီးပိုမိုလျင်မြန်သောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ တောင်ပံများကိုဖွင့်ရန်လီဗာကိုတစ်ချက်တည်းရွှေ့လိုက်ခြင်းသည်ရုပ်ရှင်၏တိကျမှုထက်အနည်းငယ်ပိုမြန်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လက်ကိုင်ကစားခြင်း၏စိတ်ကိုဖမ်းစားနိုင်ပြီးယာဉ်ကိုဆင်းသက်ရုံဖြင့်တောင်ပံများကိုထပ်မံပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
ဘယ်ကမှ start၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ 1999 ရှိခဲ့စဉ်ကထိုယန္တရားသည်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းပုံစံကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ် 2018 X-wing Starfighter သည် LEGO X-wing များ၏အထွတ်အထိပ်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်း (R75218-D2 ကိုရှေ့ဘက်သို့လှည့်ခြင်းအပါအဝင်) တီထွင်ခဲ့သောအသေးစိတ်များ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ၊
ဒါပေမယ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာရောက်လာတယ်။ ဘယ်မှာ 2015 နှင့် The Force Awakens များအတွက်အစုံ၏လှိုင်းအစုံတကယ် LEGO များအတွက်နယ်နိမိတ်အသစ်ကိုသတ်မှတ်ကြ၏ Star Wars အစုံသည် (၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ပေါင် ၆၉.၉၉ တန်ဖိုးရှိ Poe's X-wing Fighter အပါအဝင် ၇၅၁၀၂) အတွက် ၀ ယ်နိုင်သည်။ marvellous model သည်စမ်းသပ်မှုအသစ်တစ်ခုကိုပေါင် ၈၉.၉၉ အဆင့်သို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။ LEGO X-wing ၏ဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုသည်အနှစ် ၂၀ နီးပါးစုံလင်သောအရာများဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်စျေးနှုန်းလည်းမြင့်တက်ခဲ့သည်။
ယင်းသည်အမြင့် ၇၃၁ အုတ်များ (နောက်ပိုင်းတွင်ထပ်မံထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုရသေးသောဈေးကြီးသော dual- ပုံသွင်းထားသည့်သံခမောက်လုံးဒီဇိုင်းများ) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်။ ကွဲပြားခြားနားသောပြissueနာအမျိုးအစားကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ 731 ၏မော်ဒယ်သို့သွားသောတီထွင်ကြံဆတီထွင်မှုနှင့်၎င်းသည်အဆင့်မြင့် LEGO ဒီဇိုင်းတွင်ကိုယ်စားပြုသောအရာအားလုံးအတွက်၎င်းသည်အစုတစ်ခု၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကိုလည်းမှတ်သားခဲ့သည်။
၇၅၂၁၈ X-wing Starfighter သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်၏ 75218 X-wing Fighter ၏အလေးချိန်ထက်နှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်သည်။ ၎င်းသည်တောင်ပံများ၌သိသာထင်ရှားသည်။ အမှန်တကယ်မှာသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်အောက်တွင်ကျဆင်းသွားသည်။ Lego ဘယ်တော့လဲ? မော်ဒယ်ကသူ့ဟာသူမပံ့ပိုးနိုင်သည့်အပြင်၎င်းကိုအရုပ်တစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားရန်အလွန်အကျွံကုန်ကျသည့်အခါ။
၁၉၉၉ မှ ၂၀၂၁ အထိ Luke Skywalker ။
p မကုန်မှီတိုင်အောင်artထိုကဲ့သို့သောဖောင်းအပိုင်းအစအရေအတွက်နှင့်စျေးနှုန်း၏ icular ပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်, 2018 ရဲ့ 75218 X-wing Starfighter LEGO အတွက်အထွတ်အထိပ်ရှိနေဆဲ Star Wars X- တောင်ပံဒီဇိုင်းနှင့်လည်း capacity ယင်း၏ကန့်သတ်မှာဆောင်ပုဒ်၏။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၇၅၃၀၁ Luke Skywalker ၏ X-wing Fighter သည်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်ယူဆချက်များအရခွင့်ပြုထားသည်ထက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။
တတိယအနေဖြင့်အရေအတွက်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းထက်ဝက်ကျဆင်းခြင်း, 75301 သည် LEGO ကိုကိုယ်စားပြုသည် Star Wars အလယ်အလတ်။ ရွှေခေတ်အစဉ်အလာ၏အရှိန်မြင့်သောဒီဇိုင်းသည်လည်းအရေအတွက်နှင့်စျေးနှုန်းများတိုးများလာသည့်အချိန်ဖြစ်ပြီး ၇၅၃၀၁ ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်သည်။ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်ပိုမိုတင်းကျပ်သောဘတ်ဂျက်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စိန်ခေါ်မှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလက်ခံခဲ့သည် ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုထင်ဟပ်, မော်ဒယ်တစ်လျှောက်လုံး '' အသေးစိတ်အိတ်ကပ် '' ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ပျော်မွေ့ဖို့တ။
၎င်းသည်ပိုမိုပေါ့ပါး။ သေးငယ်သည်၊ ပို၍ စျေးသက်သာသည်၊ ကျော်လွှားရန်ရှင်းလင်းသောဒီဇိုင်းအပေးအယူများနှင့်အတူပင် (ဆင်းရဲသော R2-D2 သည်နောက်တစ်ခါ…)၊art ဘယ်လိုအတူတကွထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ simpli ၏အရိပ်ရှိပါတယ်city ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ 1999 X-wing Fighter သည်ခေတ်မှီဒီဇိုင်းစရိုက်များကဲ့သို့ပင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည် Lego Star Wars ပိုကြီးမားသော ၇၅၂၁၈ X-wing Starfighter တွင် ၂၀၁၈ မှသိသာထင်ရှားပြီး၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသော ဦး စားပေးတစ်ခုအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
စကေး ​​- ပြန်၏အယူအဆနေစဉ် Lego Star Wars အစုံသည်ရှေ့သို့ရွေ့လျားခြင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်၎င်း၏ပြissuesနာများမရှိဘဲမဟုတ်ပါ - ပိုမိုလွယ်ကူစွာခံစားမိသည် 75302 မှာ Imperial လွန်း (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် 75300 မှာ Imperial လည်စည်းတိုက်လေယာဉ် (ပြန်လည်သုံးသပ်) - နှင့်လျှောက်ထားရန်လွဲချော်အခွင့်အလမ်းကဲ့သို့ခံစားရပါဘူး အသစ်နှင့်ပိုမိုတိကျသောအရောင်အစီအစဉ်၎င်းသည်စူးစမ်းလေ့လာရန်အလားအလာရှိသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှင်းနေပါတယ်။ 18+ ဆောင်ပုဒ်နှင့်ထွန်းနှင့်အတူ Lego ကြီးထွားလာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူစားသုံးသူဈေးကွက်၊ အကြီးစားဘတ်ဂျက်ကြီးကြီးမားမားအပေါ်အုပ်စု၏အာရုံစိုက်လာသည် Lego Star Wars မကြာသေးမီနှစ်များ၏အစပိုင်းလာမည့်ဆက်လက်လိမ့်မည် (နှင့် 2021 လာရန်အများကြီးရှိပါတယ် ... ) သို့သော်အစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သောဗားရှင်းများစွာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ နှင့်အဓိကပရိသတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား Lego Star Wars အဘို့အဘို့, ဖျက်သိမ်းပြီးပြန်အစုံ၏ဤနီးပါး - subtheme စူးစမ်းခံရဖို့နောက်ထပ်အလားအလာမျိုးကိုကိုယ်စားပြုသည်နောက်ထပ်တိုးတက်လာခြင်းနှင့်လာမည့်လများနှင့်နှစ်များတွင်မျှော်လင့်တန်ဖိုးထား။
၇၅၃၀၁ Luke Skywalker ၏ X-Wing တိုက်လေယာဉ်ကို၎င်းမှရရှိခဲ့သည် LEGO Group.
သငျသညျသောအလုပျကိုထောကျပံ့နိုင်ပါတယ် Brick Fanatics သင်၏ LEGO ကိုဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် Star Wars ကျွန်ုပ်တို့၏တ ဦး တည်းမှတစ်ဆင့်ကြီးမားသောအသေးစားနှင့် In- အကြားသတ်မှတ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← Lego Friends 41446 သူartအင်းအိုင် City Vet ဆေးခန်းပြန်လည်သုံးသပ်
LEGOLAND Windsor သည် lockdown ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖွင့်ရန်ပြင်ဆင်နေပုံ →